हामी मधेसीबाट कहिले नेपाली हुने?
वीरगंजबाट हिँडेको भर्खर एक देखि डेढ घण्टा जति भएको होला, म त्यहाँ सम्म पुगेको । बेलुका आठ बजे हिडेको गाडी रातोमाटी पुग्दाँ साढे नौ बजेको थियो, जब म त्यो जाचँ गर्ने सुरक्षाकर्मीले बस भित्र मुखमा बत्ती बालेर सबलाई उठी झोलाहरु चेक गराउनु होस भन्नु भयो ।
यात्रीहरु एक–एक गरी आफनो झोलाहरु चेक गराउँदै गए, सबको झोलाहरु त्यो सुरक्षाकर्मीले खोली–खोली चेक गरे र सकेपछि गाडीबाट तल झरे । खई वहाँको मनमा एककासी के आयो होला, एक पटक फेरी बस भित्र जाड पड्ताल गर्न थाले र बसको डिकी खोलाई सबले आफनो सामान चेक गराउन अलि ठूलो स्वरमै भने, यात्रीहरु उनको आदेशको पालना गर्दै तल झरी डिकीमा भएका झोलाहरु जचाउँन थाले । मैले पनि शुरुको बेलामा आफ्नो झोला जचाँए र डिकीमा कुनै झोला नभएको कारण बसको बाहिर छेउमा उभि उक्त दृश्य नियाल्दै थिए ।
लगभग पाँच देखि दश मिनेटसम्म त्यो सुरक्षाकर्मीले सबको झोलाहरु डिकीबाट झिकाउँदै जाँच गर्दै थिए। अचम्मको कुरा के थियो भने सो अवधि दौरान अरु पनि रात्री बसहरु पछाडि लाईनमा थिए, सबको जाँच पडताल गर्दा लगभग एक मिनेट भन्दा पनि कम लागि रहेको थियो तर हाम्रो गाडीलाई मात्र किन यति लामो समय लिएको होला? भन्ने विषयमा मनमा उत्सुकता भई रहेको थियो ।
जे भए पनि लगभग पाँच देखि दश मिनेट पछिको समयमा हामीलाई त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सुरक्षाकर्मीले आदेश दिए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष १२, २०७३ १७:०७:५८